नेपाल आइडलकाे गाला राउण्डसम्म पुग्ने प्रदेश नम्बर ७ बाट एक्ला प्रतिस्पर्धी रवि ओड को हुन ? – Puleso
नेपाल आइडलकाे गाला राउण्डसम्म पुग्ने प्रदेश नम्बर ७ बाट एक्ला प्रतिस्पर्धी रवि ओड को हुन ?
By:puleso Published Date: मङ्लबार, अशोज ९, २०७५
प्रदेश ७ नम्बरबाट एकजना प्रतिस्पर्धी प्रतिस्पर्धाको मैदानमा उभिएका छन । भाषा, कला र मौलीक संस्कृतिको धनि प्रदेश ७ बाट अहिले एक्ला प्रतियोगी रवि ओड मात्रै पियानो राउण्ड पार गरेर गाला राउण्डमा पुगेका छन । पहिलो संस्करणबाटै निकै रूचाइएको नेपाल आइडललाइ देश बिदेशमा बस्ने थुप्रै नेपालीहरूले फ्लो गर्दै आएका छन । यो संगै दोस्रो संस्करणको बिजेता को बन्छ भन्ने जिज्ञाशा पनि धेरैमा पलाएको छ । अहिले नेपाल आइडलको टप १२ मा अटाएका रवि प्रदेश ७ का एक मात्र प्रतियोगी हुन ।
कन्चनपुर जिल्लाको कृष्णपुर नगरपालीका गुलरियामा बुवा राजेन्द्र ओड र आमा उमा ओडको कोखबाट २०५४ साल चैत्र महिनामा जन्मिएका रवि आमा बुवाको दोस्रो सन्तान हुन । मुख्य आयश्रोत र रोजिरोटिको आधार भारतको ‘वाचम्यान’को जिन्दगी बाँचिरहेका उनका बाजे र बुवाले अछामबाट बसाइ सरेर कंचनपुर गएका थिए ।
उनको पुर्ख्यौली थलो साविकको अछाम बुढाकोट गा वि स हो भने हाल साँफेबगर नगरपालीकामा पर्दछ । बाजे र बुबाले अछाम छोडेर कन्चनपुर गएपछि उतै जन्मिएका अोड अछाम पुगेका छैनन । तर उनि भित्र आफ्नो पुर्ख्यौली थलोमा पुग्ने अधुरो रहर भनै अझै जिवितै छ ।लोटस आइ स्कुलमा १२ मा अध्यनरत रविलाइ संगितको रसले छोइरहेको छ । बाध्यता गरिवीको जिन्दगीले पिल्सिएका रविका बुढा बुवा अहिले पनि भारतमा ‘वाचम्यानको’ काम गरिरहेका छन । उनि आफै पनि भारतमा गएर काम गरेको स्मरण गर्छन । “केहि महिना भारतमा काम गरेँ तर बुवाले जति दुख हर्नुछ मुइ हरूला तु नेपालमा गैकन राम्ररी पढ” भनेपछि उनि नेपालमै फर्किएर पढ्न थाले । उनका बुवा चाहान्थे कि जुन दुख आफुले भोगिरहेको छु त्यो मेरा सन्तानले भोग्न नपरोस, जसरी आफुले अर्काको देशमा पसिना बगाइरेको छु त्यसरि मेरा सन्तानको रगत र पसिना आफ्नै देशमा बगोस‘।
सामान्य परिवारमा जन्मिएका उनी आफ्ना बाज्याको प्रेरणाबाट गीत संगितमा लागेको बताउछँन् । बाज्याले अछामी मौलीक गितहरू गाउने गरेको उनि बताउछन । बाज्याले गाएको सुदूरपस्चिमेली देउडा र ठाडिभाका सुन्दा सुन्दै उनलाइ नेपाली गित संगितको मात चढ्यो । उनको आवाज बुढिगंगा जस्तै कलकल कलकल आफ्नै गतिमा बगिरहन्छ । तर जब उनि पप लगाएत अन्य हाइ रेन्जको गित गाउछन उनको आवाज बुढिगंगा जस्तै रहदैन एक्कासी बढ्ने छिपेखोलको रफ्तार र लयमा बग्न थाल्छ । यतिमात्र होइन उनि खप्तड रामारोशन जस्तै सुन्दर गित ठाडिभाका समेत गाउन सक्छन । खप्तड, रामारोशनको काखका रहेका उनि खप्तड, रामारोशनजस्तै राज्यको नजरबाट टाढा रहन चाहादैनन । आफ्नो हुनर सबै नेपालीलाइ देखाउन चाहान्छन । अहिले मेरो गित संगितको प्रेरक बाजे र मलाइ जन्माउने आमा मसंग छैनन । यदि उनिसंगै भइदिएको भए यो खुसि सुरुमा उहाँहरूसंगै साट्ने थिएँ, उनि भन्छन।
प्रदेश ७ बाट नेपाल आइडलको स्टेजमा उभिएका अन्य सबै प्रतियोगी बाहिरिएका छन् । धनगढी अडिसनबाट उक्त रियालिटी सो मा सहभागीता जनाएका रवि भने आफुले अझै राम्रो गर्ने बिश्वास देखाउछन । धनगढीको दोहोरी साँझमा गित गाएर करिब चार वर्ष अघीबाट मात्रै उनी संगीतमा सक्रिय भएर लागेका हुन् । जस्तो सुकै गित गाउन मन पराउने उनलाइ नेपाली संगित क्षेत्रमा शिव परियार, सुगम पोख्रेल र हेमन्त रानाका गीतहरु बढी मन पर्छन्। आफ्नो साधना र लगनसिलताले टप १२ मा अटाएका उनले अबको बाँकि यात्रामा सबैको आशिर्बाद, माया र सहयोगको अपेक्षा गरेको बताउछन । अार्टिकल नेपालकाे सहयाेगमा ।
भीमदत्तले ब्रह्मदेब बजार जोड्ने नेपाली भूमिको सडक कालोपत्रे गर्ने
महेन्द्रनगर, २६ मंसिर भीमदत्त नगरपालिका कार्यालयले ब्रह्मदेब बजार जोड्ने टनकपुर बाँध पूर्वपट्टिको सडक कालोपत्रेका लागि लगत इष्टमेट तयार गरेको छ विस्तृतमा...